လူတှရေဲ့ စိတျအာရုံကို အကောငျးဆုံး ဖမျးစားနိုငျမယျ့ Netflix မှ ရုပျရှငျဇာတျကားမြား။ – SoShwe
Home/Entertainment/လူတှရေဲ့ စိတျအာရုံကို အကောငျးဆုံး ဖမျးစားနိုငျမယျ့ Netflix မှ ရုပျရှငျဇာတျကားမြား။
လူတှရေဲ့ စိတျအာရုံကို အကောငျးဆုံး ဖမျးစားနိုငျမယျ့ Netflix မှ ရုပျရှငျဇာတျကားမြား။
admin November 21, 2021	Entertainment Leaveacomment
၁၉၇၀ ခုနှဈနောကျပိုငျး မက်ကဆီကို အကဉျြးထောငျတဈခုအတှငျးမှ အကဉျြးကနြသေူတဈယောကျအကွောငျး ရိုကျကူးထားတဲ့ ဖွဈရပျမှနျ ဇာတျကားတဈကားဖွဈပါတယျ။ အကဉျြးထောငျ ဘောလုံးအသငျးတဈခုမှာ သူ့အနနေဲ့ ပါဝငျနိုငျအောငျ ကွိုးစားရငျး အကဉျြးထောငျအရာရှိတှရေဲ့ မဟုတျမှနျတဲ့လုပျရပျတှေ၊ မကောငျးတဲ့ ရညျရှယျခကျြတှအေကွောငျး သတိထားမိလာပွီးနောကျပိုငျး ဘယျလိုဆကျဖွဈလာမလဲဆိုတာကိုတော့ ရုပျရှငျထဲမှာပဲ ဆကျလကျကွညျ့ရှုပေးပါနျော . . .
Maria မှာ အလှနျတရာမှ ရှကျကွောကျတတျသူဖွဈပွီး သူမရဲ့ အလုပျသဈထဲမှ လုပျဖျောကိုငျဖကျမြားနဲ့ ပွောဆိုဆကျဆံခွငျး မရှိသူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ Endre ကတော့ Maria ရဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတဈယောကျဖွဈပွီး သူမလိုပဲ လူမှုဆကျဆံရေးခေါငျးပါးကာ ဖျောရှမှေုမရှိသူတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တဈနမှေ့ာတော့ သူတို့ရဲ့ ထူးဆနျးတဲ့ အိပျမကျတှကေနတေဈဆငျ့ အခငျြးခငျြးသတိထားမိလာကွပွီး နောကျပိုငျး ဘယျလိုတှဆေကျဖွဈလာမလဲဆိုတာကိုတော့ ရုပျရှငျထဲမှာပဲ ဆကျလကျ ကွညျ့ရှုလိုကျပါနျော . . .
အသကျ ၁၃ နှဈအရှယျ Morris ဆိုတဲ့ လူမညျး ဆယျကြျောသကျ ကောငျးလေးတဈယောကျဟာ သူ့ရဲ့ဖခငျနဲ့အတူ အမရေိကနျကနေ ဂြာမနီကိုရောကျရှိလာပွီး နရောအသဈနဲ့ အံဝငျခှငျကဖြွဈအောငျ ကွိုးစားနိုငျပါ့မလား၊ သူဖွဈခငျြနတေဲ့ Rapper အဆိုတျောတဈယောကျ ဖွဈလာအောငျကော အမှနျတကယျ အကောငျအထညျဖျောနိုငျမလားဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာကောငျးအောငျ ရိုကျကူးပုံဖျောထားတဲ့ မတ်ေတာဖှဲ့ဇာတျကားကောငျးတဈကား ဖွဈပါတယျ။
အခွားဇာတျမွူးကားတှနေဲ့မတူတဲ့ ဒီဇာတျကားလေးကတော့ ညီအဈကိုနှဈယောကျရဲ့ မတူညီကှဲပွားတဲ့ အကွောငျးလေးပဲဖွဈပါတယျ။ ညီအဈကိုနှဈယောကျမှာ တဈယောကျကတော့ Los Angeles မှာ အောငျမွငျနတေဲ့ ရှနေ့တေဈယောကျဖွဈပွီး ဘဝကို ပွညျ့စုံစှာနဲ့ ကောငျးကောငျးမှနျမှနျနထေိုငျနသေူဖွဈကာ နောကျတဈယောကျကတော့ ရညျမှနျးခကျြမရှိဘဲ ဘဝကို ပေါ့ပကျြပကျြ ဖွတျသနျးနသေူတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။ တဈနမှေ့ာတော့ သူ့ညီရှိရာ Los Angeles သို့ အလညျသှားရငျ ဘယျလိုတှေ ဆကျဖွဈလာမလဲဆိုတာကိုတော့ Manson Family Vacation ထဲမှာ ဆကျလကျ ကွညျ့ရှုပေးပါဦးနျော . . .
ဒီဇာတျကားကို Alfonso Cuaron မှ ပုံဖျော ရိုကျကူးထားတာဖွဈပွီး လူးသားမြိုးနှယျစုတှကွေား ဖွဈပကျြနတေဲ့ ပဠိပက်ခတှအေကွောငျး အသားပေးရိုကျကူးထားတဲ့ ဇာတျကားကောငျးတဈကား ဖွဈပါတယျ။ ထိုဇာတျကားထဲမှာတော့ အမြိုးသားမြားအနနေဲ့ သားသမီးမှေးဖှားအောငျ မစှမျးဆောငျနိုငျတော့သလို အမြိုးသမီးတှအေနနေဲ့လညျး သားသမီးမရနိုငျတဲ့ အခွအေနဆေိုးနဲ့ ရငျဆိုငျ ကွုံတှနေ့ရေပါတယျ။ ထိုအထဲမှာမှ ထူးထူးခွားခွား ကိုယျဝနျဆောငျအမြိုးသမီးတဈယောကျ ပျေါပေါကျလာပွီး ပကျြစီးလုနီးနီးဖွဈနတေဲ့ မနာလို ရနျလိုမှုမြားနတေဲ့ Society ထဲကနေ ထိုကိုယျဝနျသညျအမြိုးသမီးကို ဘယျလို ကာကှယျစောငျ့ရှောကျမလဲဆိုတာကိုတော့ ရုပျရှငျထဲမှာပဲ ဆကျလကျကွညျ့ရှုလိုကျကွပါနျော . . .
အသကျ ၁၄ နှဈအရှယျ Susie ဆိုတဲ့ ကောငျမလေးဟာ သူ့ အိမျနီးခငျြးတဈယောကျရဲ့ ရကျစကျကွမျးကွုတျစှာ သတျဖွတျခံခဲ့ရပါတယျ။ Susie ရဲ့ မိသားစုတှနေဲ့ သူငယျခငျြးတှဟောလညျး သူမကို ဆုံးရှုံးပွီးနောကျပိုငျး ကွကှေဲဝမျးနညျးစှာ နထေိုငျရငျး အခွအေနအေားလုံး မူလအခွအေနသေို့ ရောကျရှိအောငျ ကွိုးစားနကွေရပါတယျ။ Susie ကလညျး တမလှနျဘဝကနေ သူမိသားစုကို ကာကှယျစောငျ့ရှောကျပေးရငျးနဲ့ တဈနမှေ့ာတော့ လူသတျသမားက Susie ညီမကို သတျရနျ ထပျမံ ပွငျဆငျလာတဲ့အခါမှာတော့ ဘယျလိုတှဆေကျဖွဈလာမလဲဆိုတာကို ရုပျရှငျထဲမှာပဲ ဆကျလကျကွညျ့ရှုပေးပါနျော . . .
ထိတျလနျ့ကွောကျမကျဖှယျရာ ဇာတျလမျးအမြိုးအစားဖွဈပွီး Easter, Christmas, New Year, Valentine Day နဲ့ Halloween စသဖွငျ့ Holiday တှမှော လူတှရေဲ့ ကိုးကှယျယုံကွညျမှု၊ ကှဲပွားခွားနားတဲ့ အယူအဆတှအေကွောငျး ထူးခွားပွောငျမွောကျစှာ ရိုကျကူးထားတဲ့ သညျးထိတျရငျဖို ဇာတျလမျးအမြိုးအစားဖွဈပါတယျ။ Horror ရုပျရှငျ ကွိုကျနှဈသကျသူတိုငျး အကွိုကျတှစေ့မေယျ့ ဇာတျကားကောငျးတဈကားဖွဈမှာ သခြောပါတယျ။
Russel ဆိုတဲ့ မုဆိုးတဈယောကျဟာ Alaska မွို့တဈဝိုကျ ခရီးသှားလာနရေငျး တဈနမှေ့ာတော့ အမြိုးသမီးတဈယောကျနဲ့ တှဆေုံ့ပွီး သူမကလေးကို သတျဖွတျသှားတဲ့ ဝံပုလှတှေကေို အမဲလိုကျပေးရနျကမျးလှမျးခဲ့ပါတယျ။ Russel လညျး ထိုအလုပျကို လကျခံပွီးနောကျ ဝံပုလှတှေကေို အလှယျတကူပဲ သတျဖွတျနိုငျမလား ဒါမှမဟုတျ နောကျကှယျမှာ ဘယျလို အကွောငျးအရာတှေ ရှိနနေိုငျမလဲ စသဖွငျ့ စိတျလှုပျရှားအောငျ ရိုကျကူးထားတဲ့ ဇာတျကားကောငျးတဈကား ဖွဈပါတယျ။
Zack နဲ့ Josh ဆိုတဲ့ ဆယျကြျောသကျ ကောငျလေးနှဈယောကျဟာ ငယျငယျလေးကတညျးက ခငျမငျလာကွတဲ့ သူငယျခငျြးတှဖွေဈကွပွီး တဈနမှေ့ာတော့ မထငျမှတျထားတဲ့ မတျောတဆမှုတဈခုကို ကွုံတှခေဲ့ကွကာ ထိုမတျောတဆမှုကို ဖုံးကှယျဖို့ကွိုးစားရငျး သူငယျခငျြးတှအေကွား လြှို့ဝှကျခကျြကို ထိနျးထားနိုငျမလား ဒါမှမဟုတျ ဘယျလိုအခွအေနဆေိုးတှနေဲ့ ကွုံတှရေ့မလဲဆိုတာ ရုပျရှငျထဲမှာပဲ ဆကျလကျကွညျ့ရှုလိုကျပါနျော . . .
မတူညီတဲ့ လူတနျးစား အလှာပေါငျးစုံမှ အစှနျးရောကျလူငယျတှေ စုပေါငျးပွီး ပွငျသဈနိုငျငံရဲ့ လမျးတှမှော ဖောကျခှဲမှုတှေ စတငျလုပျကိုငျရနျ ပွငျဆငျလာကွပါတယျ။ သူတို့ ပွငျဆငျထားတဲ့အတိုငျး ဖောကျခှဲမှုလုပျငနျးတှေ အမှနျတကယျဖွဈမွောကျလာခဲ့ပွီး နောကျထပျဘယျလို တိုကျခိုကျမှုမြိုးတှေ လုပျဆောငျလာမလဲဆိုတာကိုတော့ Nocturama ဆိုတဲ့ ရုပျရှငျကားထဲမှာ ဆကျလကျခံစားပေးပါနျော . . .
အသကျ ၃၈နှဈအရှယျရှိ Chris ဆိုတဲ့ အမြိုးသားတဈယောကျဟာ သူ့အနနေဲ့ ကြူးလှနျထားခွငျးမရှိတဲ့ ပွဈမှုတဈခုအတှကျ နှဈ (၂၀) ကွာ အကဉျြးထောငျကနြရောကနေ ပွနျလညျလှတျမွောကျလာပွီး သူ့ရဲ့ မှေးရပျမွသေို့ ပွနျလာခဲ့ပါတယျ။ အဲ့နောကျမှာတော့ အထကျတနျးကြောငျး ဆရာမတဈဦးဖွဈတဲ့ Carol ဖွဈသူနဲ့ တှဆေုံ့ပွီး သံယောဇဉျတှဖွေဈကာ ခဈြမိခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး နှဈအတျောကွာ အခဈြနဲ့ ဝေးကှာနသေူတဈယောကျဖွဈတဲ့အလြောကျ သူ့ရဲ့အခဈြက လှယျကူပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ ရုပျရှငျထဲမှာပဲ ဆကျလကျခံစားပေးပါနျော . . .
အသကျ (၂၀) အရှယျ ဘဝကို ပြျောပြျောနတေတျတဲ့ Donna ဆိုတဲ့ ကောငျမလေးတဈယောကျ သူမမှာ ကိုယျဝနျရှိနပွေီဆိုတာ သိပွီးနောကျပိုငျး အလုပျအကိုငျမရှိတဲ့ လကျရှိအခွအေနေ၊ သတိလကျမဲ့နရေငျးကနေ ရရှိလာတဲ့ ကိုယျဝနျနဲ့ သူမကို လိုကျပိုးပနျးနတေဲ့အမြိုးသားအကွား Donna တဈယောကျ ဘယျလိုဆကျလုပျမလဲ စသဖွငျ့ လူငယျတှအေနနေဲ့ အဓိကထားပွီးကွညျ့သငျ့တဲ့ ဇာတျကားကောငျးတဈကား ဖွဈပါတယျ။
Emma လို့ချေါတဲ့ App Designer တဈယောကျဟာ သူမခဈြသူရဲ့ သစ်စာဖောကျတာကို ခံရပွီးနောကျပိုငျး သူမရဲ့ အိမျမှေးတိရစ်ဆာနျလေးတှနေဲ့အတူ San Francisco သို့ ပွောငျးရှေ့ နထေိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့တဈနမှေ့ာတော့ မမြှျောလငျ့ဘဲ ရုတျတရကျဆိုသလို သူမရဲ့ အိမျမှေးတိရစ်ဆာနျတှကေနေ ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ အမြိုးသားတှအေဖွဈ ပွောငျးသှားပွီးနောကျပိုငျး ဘယျလိုတှေ ဆကျဖွဈမလဲဆိုတာကိုတော့ ရုပျရှငျထဲမှာပဲ ဆကျလကျကွညျ့ရှုပေးပါနျော . . .
လူတွေရဲ့ စိတ်အာရုံကို အကောင်းဆုံး ဖမ်းစားနိုင်မယ့် Netflix မှ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ။
၁၉၇၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း မက္ကဆီကို အကျဉ်းထောင်တစ်ခုအတွင်းမှ အကျဉ်းကျနေသူတစ်ယောက်အကြောင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်ကားတစ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။ အကျဉ်းထောင် ဘောလုံးအသင်းတစ်ခုမှာ သူ့အနေနဲ့ ပါဝင်နိုင်အောင် ကြိုးစားရင်း အကျဉ်းထောင်အရာရှိတွေရဲ့ မဟုတ်မှန်တဲ့လုပ်ရပ်တွေ၊ မကောင်းတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေအကြောင်း သတိထားမိလာပြီးနောက်ပိုင်း ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲ ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးပါနော် . . .
Maria မှာ အလွန်တရာမှ ရှက်ကြောက်တတ်သူဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ အလုပ်သစ်ထဲမှ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်း မရှိသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ Endre ကတော့ Maria ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူမလိုပဲ လူမှုဆက်ဆံရေးခေါင်းပါးကာ ဖော်ရွေမှုမရှိသူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်နေ့မှာတော့ သူတို့ရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ အိပ်မက်တွေကနေတစ်ဆင့် အချင်းချင်းသတိထားမိလာကြပြီး နောက်ပိုင်း ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲ ဆက်လက် ကြည့်ရှုလိုက်ပါနော် . . .
အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် Morris ဆိုတဲ့ လူမည်း ဆယ်ကျော်သက် ကောင်းလေးတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ဖခင်နဲ့အတူ အမေရိကန်ကနေ ဂျာမနီကိုရောက်ရှိလာပြီး နေရာအသစ်နဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် ကြိုးစားနိုင်ပါ့မလား၊ သူဖြစ်ချင်နေတဲ့ Rapper အဆိုတော်တစ်ယောက် ဖြစ်လာအောင်ကော အမှန်တကယ် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင် ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ မေတ္တာဖွဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားဇာတ်မြူးကားတွေနဲ့မတူတဲ့ ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ရဲ့ မတူညီကွဲပြားတဲ့ အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်ကတော့ Los Angeles မှာ အောင်မြင်နေတဲ့ ရှေ့နေတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဘဝကို ပြည့်စုံစွာနဲ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်နေသူဖြစ်ကာ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ရည်မှန်းချက်မရှိဘဲ ဘဝကို ပေါ့ပျက်ပျက် ဖြတ်သန်းနေသူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ သူ့ညီရှိရာ Los Angeles သို့ အလည်သွားရင် ဘယ်လိုတွေ ဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့ Manson Family Vacation ထဲမှာ ဆက်လက် ကြည့်ရှုပေးပါဦးနော် . . .
ဒီဇာတ်ကားကို Alfonso Cuaron မှ ပုံဖော် ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး လူးသားမျိုးနွယ်စုတွေကြား ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ပဠိပက္ခတွေအကြောင်း အသားပေးရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဇာတ်ကားထဲမှာတော့ အမျိုးသားများအနေနဲ့ သားသမီးမွေးဖွားအောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့သလို အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့လည်း သားသမီးမရနိုင်တဲ့ အခြေအနေဆိုးနဲ့ ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ ထိုအထဲမှာမှ ထူးထူးခြားခြား ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ပေါ်ပေါက်လာပြီး ပျက်စီးလုနီးနီးဖြစ်နေတဲ့ မနာလို ရန်လိုမှုများနေတဲ့ Society ထဲကနေ ထိုကိုယ်ဝန်သည်အမျိုးသမီးကို ဘယ်လို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မလဲဆိုတာကိုတော့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲ ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါနော် . . .
အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် Susie ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးဟာ သူ့ အိမ်နီးချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ Susie ရဲ့ မိသားစုတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဟာလည်း သူမကို ဆုံးရှုံးပြီးနောက်ပိုင်း ကြေကွဲဝမ်းနည်းစွာ နေထိုင်ရင်း အခြေအနေအားလုံး မူလအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိအောင် ကြိုးစားနေကြရပါတယ်။ Susie ကလည်း တမလွန်ဘဝကနေ သူမိသားစုကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရင်းနဲ့ တစ်နေ့မှာတော့ လူသတ်သမားက Susie ညီမကို သတ်ရန် ထပ်မံ ပြင်ဆင်လာတဲ့အခါမှာတော့ ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကို ရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲ ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးပါနော် . . .
ထိတ်လန့်ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Easter, Christmas, New Year, Valentine Day နဲ့ Halloween စသဖြင့် Holiday တွေမှာ လူတွေရဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု၊ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အယူအဆတွေအကြောင်း ထူးခြားပြောင်မြောက်စွာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ သည်းထိတ်ရင်ဖို ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Horror ရုပ်ရှင် ကြိုက်နှစ်သက်သူတိုင်း အကြိုက်တွေ့စေမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်။
Russel ဆိုတဲ့ မုဆိုးတစ်ယောက်ဟာ Alaska မြို့တစ်ဝိုက် ခရီးသွားလာနေရင်း တစ်နေ့မှာတော့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး သူမကလေးကို သတ်ဖြတ်သွားတဲ့ ဝံပုလွေတွေကို အမဲလိုက်ပေးရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ Russel လည်း ထိုအလုပ်ကို လက်ခံပြီးနောက် ဝံပုလွေတွေကို အလွယ်တကူပဲ သတ်ဖြတ်နိုင်မလား ဒါမှမဟုတ် နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လို အကြောင်းအရာတွေ ရှိနေနိုင်မလဲ စသဖြင့် စိတ်လှုပ်ရှားအောင် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။
Zack နဲ့ Josh ဆိုတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် ကောင်လေးနှစ်ယောက်ဟာ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ခင်မင်လာကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြပြီး တစ်နေ့မှာတော့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ မတော်တဆမှုတစ်ခုကို ကြုံတွေ့ခဲ့ကြကာ ထိုမတော်တဆမှုကို ဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားရင်း သူငယ်ချင်းတွေအကြား လျှို့ဝှက်ချက်ကို ထိန်းထားနိုင်မလား ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လိုအခြေအနေဆိုးတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာ ရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲ ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါနော် . . .
မတူညီတဲ့ လူတန်းစား အလွှာပေါင်းစုံမှ အစွန်းရောက်လူငယ်တွေ စုပေါင်းပြီး ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ လမ်းတွေမှာ ဖောက်ခွဲမှုတွေ စတင်လုပ်ကိုင်ရန် ပြင်ဆင်လာကြပါတယ်။ သူတို့ ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတိုင်း ဖောက်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတွေ အမှန်တကယ်ဖြစ်မြောက်လာခဲ့ပြီး နောက်ထပ်ဘယ်လို တိုက်ခိုက်မှုမျိုးတွေ လုပ်ဆောင်လာမလဲဆိုတာကိုတော့ Nocturama ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ ဆက်လက်ခံစားပေးပါနော် . . .
အသက် ၃၈နှစ်အရွယ်ရှိ Chris ဆိုတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ သူ့အနေနဲ့ ကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ ပြစ်မှုတစ်ခုအတွက် နှစ် (၂၀) ကြာ အကျဉ်းထောင်ကျနေရာကနေ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီး သူ့ရဲ့ မွေးရပ်မြေသို့ ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့နောက်မှာတော့ အထက်တန်းကျောင်း ဆရာမတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Carol ဖြစ်သူနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး သံယောဇဉ်တွေဖြစ်ကာ ချစ်မိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း နှစ်အတော်ကြာ အချစ်နဲ့ ဝေးကွာနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အလျောက် သူ့ရဲ့အချစ်က လွယ်ကူပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲ ဆက်လက်ခံစားပေးပါနော် . . .
အသက် (၂၀) အရွယ် ဘဝကို ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ Donna ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် သူမမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဆိုတာ သိပြီးနောက်ပိုင်း အလုပ်အကိုင်မရှိတဲ့ လက်ရှိအခြေအနေ၊ သတိလက်မဲ့နေရင်းကနေ ရရှိလာတဲ့ ကိုယ်ဝန်နဲ့ သူမကို လိုက်ပိုးပန်းနေတဲ့အမျိုးသားအကြား Donna တစ်ယောက် ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲ စသဖြင့် လူငယ်တွေအနေနဲ့ အဓိကထားပြီးကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။
Emma လို့ခေါ်တဲ့ App Designer တစ်ယောက်ဟာ သူမချစ်သူရဲ့ သစ္စာဖောက်တာကို ခံရပြီးနောက်ပိုင်း သူမရဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေနဲ့အတူ San Francisco သို့ ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်နေ့မှာတော့ မမျှော်လင့်ဘဲ ရုတ်တရက်ဆိုသလို သူမရဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကနေ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အမျိုးသားတွေအဖြစ် ပြောင်းသွားပြီးနောက်ပိုင်း ဘယ်လိုတွေ ဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲ ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးပါနော် . . .
Previous ရငျခငျြးဆကျ အမွှာနှဈယောကျကျို အခမဲ့ ခှဲစိတျကုသပေးခဲ့တဲ့ ဆရာဝနျမြား။
Next မတူညီတဲ့ စရိုကျလက်ခဏာ၊ အယူအဆတှရှေိကွတဲ့ စုံတှဲတှဟော လိုကျဖကျမှုရှိတယျဆိုတာကို သကျသပွေလိုကျတဲ့ ကမ်ဘာကြျောအနုပညာရှငျမြား။